8th MUM Yay City Director - Ko Kyaw Khaung @ Chriz Lynn (Make Up Artist)
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် ရေးမြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ရေးမြို့၏ City Director အဖြစ် Ko Kyaw Khaung @ Chriz Lynn (Make Up Artist) မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
Miss Universe 2019 Dinner Night
Some snaps with the Reigning Miss Universe Catriona Gray & Miss Universe sisters.
Dinner Dress by Min Thet Sean
Miss Universe 2019 TOP 20 Voting Now Open
မြန်မာကိုယ်စားပြုအလှမယ် ဆွေဇင်ထက် TOP 20 Finalists ဖြစ်ဖို့အတွက် Vote ပေးကြဖို့ အင်အားပြကြဖို့အချိန်ကြရောက်လာပါပြီရှင်။
MUM 2019 Activity - Smile Train Program
Today at the smile train activity with miss universe sister queens.
Interview Activity for Registration and TV
We have interview activity for Registraion and TV with Miss Universe Queens sisters.
MUM 2019 Swe Zin Htet Safely Arrive to Atlanta
Miss Universe ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အတ္တလန္တာမြို့ကို ချောမောစွာရောက်ရှိပါပြီ။ အတူနေရမယ့်အခန်းဖော်ကတော့ Miss Japan နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Miss Universe Myanmar 2019 ဆုရှင် ဆွေဇင်ထက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာများအား "The QUEEN" Aesthetics မှ နောက်ဆုံးပေါ် Lutronic Clarity2လေဆာစက်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် Hair Removal Laser treatment နှင့် Whitening & Anti-Aging Facial Treatment တို့ကို ပြုလုပ်ပေး
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်၊ အတ္တလန္တာမြို့တွင် (၆၉) ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အလှမယ်ဆွေဇင်ထက်သည် ယနေ့ နံနက် ၈း၂၀ တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ MAIေ
Atlanta, Georgia တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Miss Universe 2019 ပြိုင်ပွဲကြီးနှင့် Shark El Sheikh တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Miss Intercontinental 2019 ပြိုင်ပွဲများသို့ မြန်မာကိုယ်စားပြုအလှမယ် များအဖြစ် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် Miss Universe Myanmar 2019 - Swe Zi
Queens of MUM
Designer: Chic Pauk (Mogok Pauk Pauk) round @MFDEA FASHION FIESTA
Photo: Minn Mon Chan @ Novotel Yangon Max
Photo: Ko Nyunt Zaw Aung
8th MUM Tachileik City Director - Hnin Thway Yu Aung (Miss Universe Myanmar 2018)
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် တာချီလိတ်မြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် တာချီလိတ်မြို့၏ City Director အဖြစ် Hnin Thway Yu Aung (Miss Universe Myanmar 2018) မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
8th MUM Mogok City Director - Tauk Tauk (Make Up Artist - Mandalay)
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် မိုးကုတ်မြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် မိုးကုတ်မြို့၏ City Director အဖြစ် Tauk Tauk (Make Up Artist - Mandalay) မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
8th MUM Pyin Oo Lwin City Director - U Aung Tint Ko
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် ပြင်ဦးလွင်မြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဦးလွင် မြို့၏ City Director အဖြစ် U Aung Tint Ko မှ ဆက်လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
8th MUM Myawaddy City Director - Ko Lin Wai Htoo (Fashion Designer - မြဝတီ)
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် မြဝတီမြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် မြဝတီမြို့၏ City Director အဖြစ် Ko Lin Wai Htoo (Fashion Designer - မြဝတီ) မှ ဆက်လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
8th MUM Pakhokeku City Director - SK Event Management
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် ပခုက္ကူမြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ပခုက္ကူ မြို့၏ City Director အဖြစ် SK Event Management မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။